Multicolor jumlo 13.3 inji elektaroonig ah shelf Label soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Zkong
-Name: Midabkeedu badan yahay 13.3 inji Label Labadeed Elektiroonig ah ESL
-Qiyaas: 13.3 ″
- Cabbir kale: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″
-Luuqadda: Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska, Thai, Carabiga, Isbaanishka, Boortaqiiska iwm.
Nolosha Battery: 5 sano
-Dheeh: caddaan, madow, guduud, jaalle, Buluug, Cagaar, guduud iwm
Heerkulka Shaqada ： 0 ~ 45 ℃
Shahaadooyinka: ISO / CE / FCC / ROHS iwm
-Function: bandhig macluumaad, iftiinka LED, NFC, maareynta dukaanka iwm
Label Labiska elektaroonigga ah ee daruuriga badan
Waxaan u qaabeynay aaladda elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'shelf shelf' (ESL) oo leh tafaariiqleyaasha hormuudka ka ah Shiinaha ee Alibaba Runtii waa xalka heer shirkadeed iyadoo la adeegsanayo Bluetooth, Wi-Fi, iyo teknolojiyada xisaabinta daruuriga, oo bixisa qiimaha ugu hooseeya iyo waxqabadka ugu wanaagsan ee iibiye kasta oo ESL ah. Calaamadda elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'ESL' waa mid si toos ah loo qiyaasi karo isla markaana bartamaha loo maareeyo illaa mug aan xadidnayn, wax adeeg ah looma baahna dukaanka dhexdiisa.
Cadaadiska tafaariiqda ayaa si joogto ah u kordhaya. Baahida loo qabo in la iswaafajiyo Qiimaha elektarooniga ah iyo Qiimaha tafaariiqda, teknoolojiyada cusub ayaa lagu raad joogaa. Faa'iidooyinka maaraynta qiimaha firfircoon ee dhameystiran iyadoo la yareynayo culeyska shaqada waa iska cadahay. Waxaad si fudud ugu hagaajin kartaa qiimaha si waafaqsan tartamayaashaada ama waxaad kobcin kartaa habdhaqan adeegsi gaar ah.
Qiimaha ku-meel-gaadhka ahi maaha isbeddel mustaqbal laakiin waa xaqiiq. Macaamiisha waxay ku helaan qiimo kala duwan dalabyo badanaa isku mid ah iyada oo loo marayo marinno kala duwan. Tani waxay ku baaqeysaa aalado lagu xakameeyo laguna hagaajiyo qaar badan oo ka mid ah kanaaladaas. Intaa waxaa sii dheer, nidaamkeenu wuxuu bixiyaa xaqiiqo ahaan, waqti badbaadin iyo iswaafajinta kheyraadka. Isku hagaajinta qiimaha gacanta waa waqti iyo kheyraad cunis macno malahan hadii ay tahay ganacsi weyn, tafaariiqle gawaari, supermarket, dukaanka dharka ama ganacsi yar. Ku xooji naftaada inaad dib uqeybiso kheyraadkaas. Iswaafajinta qiimaha dhijitaalka ah ee balaaran oo leh astaamaha shelf ee elektiroonigga ah hadda waa arrin daqiiqado ah halkii saacado laga heli lahaa.
Ganacsiga elektaroonigga ah wuxuu sii kordhiyaa cadaadiska tartanka ee tafaariiqleyda wuxuuna horseedaa isbeddellada qiimaha badan ee soo noqnoqda. Soo bandhigida sicir horey u dhacay ayaa badanaa keenta kalsooni deg deg ah oo xagga macaamiisha ah, oo qof ganacsade ah uusan awoodin dhaqaalaha maanta. Calaamadaha qiimaha elektaroonigga ah waxay bixiyaan suurtagalnimada in looga hor tago baahiyahaas dabacsanaan, wax soo saar iyo saxnaan. Beddelida warqadda qiimaha warqadda dhaqameedku waxay qaadataa 3 daqiiqo, taas oo si dhakhso ah ugu kordhisa dhowr saacadood oo shaqo dukaanka oo dhan. Meelmarinta qiimaha gaabiska ah, kharashka kordhay iyo suurtagalnimada qaladka sare, astaamaha qiimaha waraaqaha ayaa sidoo kale sababi kara qashin muhiim ah. Jawaabta oo kooban awgeed, calaamadaha waqtiga ayaa dib loo cusbooneysiin karaa inta lagu jiro saacadaha shaqada iyada oo aan khatar loo gelin khaladka sagxada iyo qiimaha diiwaanka lacagta oo yareynaya cabashooyinka.
Aynu adeegsanno sumadda qiimaha dhijitaalka ah si aan u xallino dhammaan arrimaha ay ku xardhan yihiin astaamaha waraaqaha dhaqameed.
Sidee ESL u shaqaysaa?
Isweydaarsiga 'ESL' ee 'Cloud Platform'
Zkong dhammaan cabirrada 23 Inch 35 inch 55 inch 65 Fidiyey LCD shaashadda shaashadda ciyaaryahanka calaamado dijitaal ah shaashadda taabashada muuqaalka muuqaalka
1. Maxaa ka kooban dhamaan nidaamka esl?
Waxay ka kooban tahay calaamadaha ESL + saldhigyada saldhigga + PDA scanners + softiweer + xirmooyinka sii kordhaya ee calaamadaha ESL: 1.54 '', 2.13 '', 2.66 '', 2.7 '', 2.9 '', 4.2 '', 5.8 '', 7.5 '' ' Calaamadaha ESL ee lagu rakibay meelo kala duwan
2. Waa maxay tusmada shaashadda?
Template wuxuu qeexayaa macluumaadka lagu soo bandhigi doono shaashadda ESL iyo sida loo sameeyo. Badanaa bandhiga macluumaadka waa magaca badeecada, qiimaha, asalka, lambarka baar, iwm.
3. Template waa la habeyn karaa?
Looma baahna in la habeeyo. Waa muuqaal in wax laga beddelo shaxanka, oo kaliya la mid ah sawiridda iyo ku qoridda warqad maran. Barnaamijkeena, qof walba waa naqshadeeye.
4. Haddii aan u soo iibsado baarka tijaabada, maxaan fiiro gaar ah u leeyahay?
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo tixraac ah. a. Nooca aasaasiga ah: 1 * Saldhigga saldhigga + dhowr sumado ESL ah + softiweer b. Midka caadiga ah: 1 sanduuqa xirmooyinka demo (dhammaan noocyada calaamadaha ESL + 1 * saldhigga saldhig + software + 1 * Sawirka PDA + 1 xirmooyinka xirmooyinka + 1 * sanduuqa) * Fadlan la soco saldhigga saldhiggu waa lagama maarmaan imtixaanka. Calaamadeena 'ESL' waxay la shaqeyn karaan oo keliya saldhiggeena saldhigga.
5. Sidee loo iibsadaa?
Marka hore wax nooga sheeg shuruudahaaga ama dalabkaaga Marka labaad waxaan kugu soo qaadan doonaa sida aad u hesho macluumaadkaaga Marka sadexaad fadlan dhig dhigaalka sida ku xusan oraahda oo noo soo dir biilka bangiga Marka afraad wax soo saarka iyo baakadka ayaa la diyaarin doonaa
6. waqtiga hogaaminta?
Amarka muunadda badiyaa waa 3-10 maalmood Amarka rasmiga ahi waa 1-3 toddobaad
7. Sidee ku saabsan dammaanad?
1 sano loogu talagalay ESL
8. Ma keentaa xirmo demo ESL ah si aad u tijaabiso?
Haa. Qalabka demo ee loo yaqaan 'ESL demo' ayaa la heli karaa, kaas oo ay ku jiraan dhammaan cabirrada calaamadaha qiimaha ESL-ka, saldhigga saldhigga, softiweerrada iyo qalabyada qaarkood.
Hore: Multicolor 5.8 inji Label Labis elektaroonig ah ESL
Calaamadaha Calaamadaha Gaarka ah
Soosaarayaasha Sumadaha Dijital ah
Calaamadaha Qiimaha Dijital ah
Shirkadaha Sheyga Dijital ah
E Ink Label Label
Calaamadaha Calaamadaha Sheegashada Xargaha
Soosaarayaasha Label Labis elektiroonig ah
NFC calaamadeynta shelf shelf
Labels shelf Edge
Wireless Bluetooth Tag oo leh NFC Epaper Price Ta ...